Bogga ugu weyn Bangiyada ugu Wanaagsan Massachusetts 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Isha sawirka: www.wikipedia.com
La shaqaynta bangiga saxda ah ayaa kaa caawin kara hagaajinta yoolalkaaga maaliyadeed waxayna ku siin kartaa degganaansho maskaxeed. Marka, haddii aad ku nooshahay Massachusetts, laguguma tegi karo ikhtiyaar la'aan maxaa yeelay waxaa jira qaar ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan Massachusetts.
Mid kasta oo ka mid ah bangiyadaani waxay u taagan yihiin wax ka duwan. Laakiin, waxay wali siiyaan macaamiishooda adeegyo heer sare ah sannadihii waayo-aragnimada.
Sidaa darteed, waxaan fahansanahay in in ka badan 200 oo bangi oo ku yaal Massachusetts laga doorto, ogaanshaha bangiga saxda ah ee bixiya dhammaan baahiyaha maaliyadeed ee aad ka filayso bangi inay adkaan karto.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah inaad ogaato in dhammaantood, ay jiraan bangiyo gaar ah oo istaagay imtixaanka waqtiga, iyadoo dib -u -eegisyo badan oo wanaagsan ay ka imanayaan macaamiisha.
Marka, maqaalkan, waxaad ku baran doontaa bangiyada ugu fiican Massachusetts ee ku siiya adeegyo maaliyadeed oo qanciya. Sidoo kale deebaajiyadooda ugu yar, heerka kaydinta APY, iyo noocyada koontada.
Maxay yihiin Bangiyada ugu Fiican Massachusetts?
Iyada oo ku xidhan baahidaada dhaqaale iyo yoolalkaaga, waxaa jira bangiyo wanaagsan oo ku yaal Massachusetts oo dabooli kara baahiyahaaga.
Dhab ahaantii, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inaad hesho bangi bixiya dhammaan adeegyada aad u baahan tahay si aad u qanciso halkii aad bangiyada kala duwan u adeegsan lahayd adeegyo kala duwan.
Bangiyadaas sare ee Massachusetts waxaa ka mid ah bangiyada onlaynka ah, bangiyada dhaq-leben-hoobiye-dhaqmeedyo leh dhowr laamood, iyo kuwo kale oo leh laamo badan.
Marka, halkan waxaa ah bangiyada ugu fiican Massachusetts. Maskaxda ku hay in dhammaan bangiyadan ay yihiin caymis FDIC, qiimayaashuna ay ku jiraan xisaabta Kaydka.
#1. Bangiga TTD
Deposit Ugu Yar: None
Noocyada Xisaabta Koontada Hubinta, iyo Kaydka
Bangiga TD waa mid ka mid ah bangiyada ugu da'da weyn uguna weyn Ameerika, oo leh khibrad ka badan 150 sano. Bangigu wuxuu siiyaa xalal isku mid ah macaamiisha leh dakhli kala duwan.
Daraasad dhowaan ay samaysay JD power, bangiga TD ayaa loo aqoonsaday adeegiisa gaarka ah ee macmiilka. In kasta oo TD Bank uu leeyahay raad la taaban karo oo ku taal Florida, haddana Massachusetts waxaa weli ku yaal inta badan laamihiisa.
Ka sokow adeeggeeda macmiilka ee gaarka ah, bangiyada TD waxay bixiyaan adeegyo kale sida maareynta hantida, alaabada qorshaynta hawlgabka, bangiyada shaqsiyeed, iyo qaar kaloo badan.
Muuqaal aad u fiican oo ku jira mareegaha bangiyada TD waa “Xarunta Kheyraadka Canshuurta” oo ka caawisa waaxaha canshuuraha iyo kuwa kale inay la socdaan isbeddelada ku dhaca nidaamka canshuurta.
Intaa waxaa dheer, bangigu wuxuu bixiyaa laba ikhtiyaar oo koontada kaydka ah- koonto kayd oo fudud iyo koontada kaydka ee la doorbiday. In kasta oo bangiyada kale ay bixin karaan xulashooyin xisaabeed oo dhowr ah, bangiga TD wuxuu leeyahay adeeg macmiil iyo daacadnimo ka wanaagsan.
TD ayaa ugu sarreysa shaxdan sida bangiga ugu wanaagsan Massachusetts oo leh in ka badan 100 laamood oo gobolka ku yaal.
Faahfaahin intaa ka badan raadso adigoo gujinaya badhanka hoose.
BOOQO TD BANKIGA
Deposit Ugu Yar: $ 25- ardayda xisaabta jeegga
Noocyada Xisaabta Kaydinta, Hubinta
Bangiga Ameerika waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah bangiyada ugu da'da weyn Mareykanka oo leh in ka badan 200 laamood oo bangi oo ku baahsan Massachusetts. Bangigu wuxuu ardayda siiyaa badeecooyin kala duwan oo bangiyeed.
Koontada jeegga xudunta u ah waxaa leh xeer lacag-la'aan ah oo ku lifaaqan ardayda 24 sano iyo ka yar. Waxaad ku furi kartaa koontada ugu yaraan $ 25, ka dibna uma baahnid inaad bixiso khidmad dayactir bil kasta ah ilaa aad dhammaysato.
Ardayda safarka ah lama dhaafo maaddaama ay si fudud u maamuli karaan xisaabaadkooda, u wareejin karaan, oo ay ku samayn karaan macaamil maaliyadeed kale iyada oo loo marayo bangiga barnaamijka moobiilka ee Ameerika.
Intaa waxaa dheer, Bangiga Ameerika Abaalmarinta Lacagta Lacageed ee kaarka Ardayda wuxuu bixiyaa 1% kaash ah dhammaan iibsiyada. Si kastaba ha ahaatee, waxaad 2% ka heleysaa dukaamada raashinka oo dooro naadiyada jumlada ah. Waxaad sidoo kale heli doontaa 3% gaaska $ 2,500 ee ugu horreeyey ee lagu kharash gareeyey qaybahan marka la isku daro. Waxaa intaa dheer, bangigu wax lacag ah kama qaado koontadan sannad walba.
Maskaxda ku hay in Bank of America leeyahay ciqaab haddii aad koontadaada dhaafto. Markaa waxaad doonaysaa inaad taxaddar yeelato oo aad si joogto ah ula socoto dheelitirkaaga adiga oo kharashaadkaaga hubinaya.
Koontada hubinta ardayda waxay leedahay APY oo ah 0.00% iyo deebaajiga ugu yar ee $ 25.
Wax badan ka ogow Bangiga Ameerika adiga oo gujinaya badhanka hoose.
BANGIGA BOOQASHADA AMERICA
Baro kuwan 7 Talaabo Oo Fudud Oo Ku Saabsan Sida Loo Bedelo Bangiyada Adigoon Walbahaar Lahayn | Tilmaan Buuxo
#3. Bangiga Santander
Deposit Ugu Yar: $ 25
Noocyada Xisaabta Kaydinta, hubinta, iyo CD -yada,
Bangiga Santander waxaa lagu yaqaanaa qaybtiisa gaarka ah ee xisaabaadka hubinta. Laga soo bilaabo hubinta qiimaha ardayga, hubinta aasaasiga ah ee Santander ilaa Premier Santander iyo hubinta, iyo Santander dooro hubinta.
Hubinta Xaqa Kaliya ee Santander Bank ayaa ku habboon macaamiisha raadinaya koonto jeeg oo lacag la'aan ah. Haddii aad sameyso hal macaamil bil kasta, uma baahnid inaad bixiso khidmadda dayactirka billaha ah $ 9.99.
Sidoo kale, koontadu uma baahna dheelitir ugu yar, taasoo la micno ah inaadan helin wax ciqaab ah inaad yeelato koonto madhan.
Inkasta oo Bangiga Santander uu leeyahay laamo ilaa Waqooyi -bari, haddana weli waa ikhtiyaar bangi oo aad u fiican dadka deggan Massachusettstes oo leh in ka badan 600 laamood. La yaab ma laha inay ka dhigto liiska bangiyada ugu fiican Massachusetts.
BANKII BANDHIGA SANTANDERKA BOOQO
#4. Bangiga Muwaadiniinta
Deposit Ugu Yar: $0
Noocyada Xisaabta Xisaabaadka kaydka, xisaabaadka suuqa lacagta, CD -yada iyo (IRAs).
Bangiga muwaadiniintu wuxuu ku habboon yahay macaamiisha jecel inay helaan bangiyo leben-hoobiyeyaal dhaqameed ah. Bangigu wuxuu u soo bandhigaa bulshada uu u adeego badeecooyin kala duwan. Badeecadani waxay isugu jirtaa xisaabaadka kaydka ilaa xisaabaadka suuqa lacagta, iyo amaahda shaqsiga ah.
Sida bangiga Santander, waxaad iska ilaalin kartaa khidmadda adeegga billaha ah ee $ 9.99 koontadaada jeegga adigoo samaynaya ugu yaraan hal dhigaal wareeg kasta oo biil ah.
Haddii aad jeclaan lahayd koonto jeeg oo aad u horumarsan, markaa Hubinta Platinum Bank Citizens ama Hubinta Bangiga Muwaadiniinta Platinum Plus ayaa kuu noqon doonta ikhtiyaar kuu fiican.
Bangiga muwaadinka wuxuu leeyahay in ka badan 1000 laamood oo in ka badan 240 ka shaqeeya Massachusetts.
Intaa waxaa sii dheer, bangigu wuxuu siiyaa bangiga dhowr astaamood oo dijital ah si loo fududeeyo bangiyada internetka.
Wax badan ka ogow koontooyinkaan iyo sida ay kuu caawin karaan adiga oo gujinaya badhanka hoose.
BANGIGA MUWAADINIINTA BOOQO
Noocyada Xisaabta Hubinta, koontada kaydka
Chase waa hoosaad ka tirsan JP Morgan Chase, oo ah hay'ad maaliyadeed oo aad u weyn oo caan ku ah inay siiso macaamiisheeda adeegyo maaliyadeed oo heer sare ah.
Adeegyada la bixiyo waxaa ka mid ah xisaabaadka hubinta macaamiisha, koontooyinka kaydka, CD -yada, kaararka deynta, amaahda guryaha, khadadka sinnaanta guriga ee deynta, amaahda baabuurka, iyo adeegyada maalgelinta.
Intaa waxaa sii dheer, sanado badan oo waayo -aragnimo bangiyeed ah, Chase waxay bixisaa talo maaliyadeed iyo sidoo kale ilo kaa caawisa bilowga iyo kobcinta ganacsigaaga.
Guud ahaan, Chase waxaa lagu yaqaanaa inuu bixiyo talooyinka ganacsiga ugu fiican sidaa darteedna wuxuu sameeyaa liiska bangiyada ugu wanaagsan Massachusetts.
Baro wax badan oo ku saabsan bangigan sare ee Massachusetts adiga oo gujinaya badhanka hoose.
BANGIGA BOOQASHADA BOOQO
Arag tani Suuqa lacagta vs Shahaadada dhigaalka: keebaa fiican?
#6. Bangiga Trustland
Deposit Ugu Yar: $ 50
Noocyada Xisaabta Kaydinta, Hubinta, CD -yada
Bangiga Rockland Trust waa bangi goboleed leh laamo ku yaal bariga Massachusetts iyo gobolka MetroWest. Sababtoo ah sanooyinkii ay siineysay macaamiisheeda adeegyo lagu qanco, bangigu wuxuu si joogto ah ugu sarreeyaa qanacsanaanta macaamilka ugu fiican.
Sida xaqiiqda ah, Forbes wuxuu ku qiimeeyay inuu yahay bangiga #1 ee Massachusetts ee bangiyada ugu fiican adduunka 2020.
Sidoo kale, bangigan ganacsi ee adeegga buuxa wuxuu bixiyaa adeegyo bangiyeed oo badan, maalgashi, iyo caymis. Koontada jeegga lacag la'aanta ah waa mid ka mid ah xulashooyinka caanka ah ee bangiyada. Koontadu ma laha khidmadda adeegga bil kasta iyo dheelitirka ugu yar.
Intaa waxaa sii dheer, bangiga kalsoonida ee Rockland wuxuu bixiyaa ikhtiyaarro kaladuwan oo kaladuwan oo leh qiime caddaalad ah haddii aad rabto inaad keydiso waqti dheer. Iyo noocyo kala duwan oo caymis iyo ikhtiyaarro amaah ah oo ay ku jiraan amaahda guryaha iyo khadadka sinnaanta guriga ee deynta. Waxa kale oo aad marin u heli kartaa bangiyada onlaynka ah iyo kuwa guurguura.
Wax badan ka baro bangiga adiga oo gujinaya badhanka hoose.
BOOQO BANKII AAMINTA ROCKLAND
#7. Bangiga Dadweynaha United
Noocyada Xisaabta Kaydinta, Hubinta, iyo CD -yada
Mid kale oo ka mid ah bangiyada adeegyada maaliyadeed ee ugu da'da weyn dalka waa Bangiga Dadweynaha. Waxaa la aasaasay 1842, bangiga Peoples United wuxuu leeyahay in ka badan 170 sano oo waayo -aragnimo ah bixinta bangiyada ganacsiga iyo tafaariiqda, iyo sidoo kale adeegyada maareynta hantida.
Ka sokow adeegyadeeda kale ee bangiyada ee caadiga ah, muuqaal ka dhigaya Peoples United Bank mid muuqda waa barnaamijkiisa bangiga guurguura. Barnaamijku wuxuu ku leeyahay 4.8/5 qiimeyn xiddigood dukaanka Apple iTunes, iyo 3.9/5-xiddig qiimeynta Google Play Store.
Barnaamijkan mobilada wuxuu leeyahay nidaam amni oo heer sare ah kaas oo hubinaya inaadan lumin lacagtaada haddii kaarkaagu kaa lumo. Waxaad si fudud uga horjoogsan kartaa kaarka app -ka haddii aad lumiso. Tani waxay ka horjoogsanaysaa qof kale inuu isticmaalo kaarka.
Intaa waxaa dheer, haddii aad ka shakisan tahay in koontadaada loo adeegsado meel kale, waxaad ku xaddidi kartaa meelaha juqraafiyeed ee la doonayo.
Tilmaamo badan ayaa ka dhigaya barnaamijkan mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan ee ku yaal Massachusetts, waad ku baran kartaa adiga oo gujinaya badhanka hoose.
BOOQASHADA DADKA BANGIGA MIDOOBAY
Noocyada Xisaabta Kaydinta, Hubinta, suuqa lacagta, CD -yada iyo xisaabaadka haynta.
CIT waa hoosaad ka tirsan Kooxda CIT, oo ah hay'ad maaliyadeed oo hormuud u ah in ka badan qarni qibrad u leh bangiyada shaqsiyeed, xalalka ganacsiga iyo bangiyada ganacsiga.
CIT waxaa loo yaqaanaa bangiga ugu fiican kaydinta sababta oo ah xulashooyinkeeda kaydinta ee kala duwan oo leh shuruudo caddaalad ah iyo qiimayaal kaa caawinaya inaad dhisto sanduuqaaga haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah. Websaytka bangiyada wuxuu bixiyaa nuxur waxbarasho oo ku saabsan hababka badbaadinta iyo talooyinka ugu fiican.
Qaybta bangiyada ganacsiga ee shirkadda waxaa ka mid ah maalgelinta ganacsiga, bangiyada ururka bulshada, bangiyada suuqa dhexe, qalabka iyo maalgelinta iibiyeyaasha, adeegyada khasnadda iyo lacag bixinta, iyo suuqyada raasumaalka iyo maareynta hantida.
Qeybta bangiyada macaamilka ee CIT waxaa ku jira bangiga tooska ah ee qaranka iyo shabakadda laanta gobolka.
Baro wax badan adigoo gujinaya badhanka hoose.
BANGIGA CIT BOOQO
Baro Sida lacag loogu sameeyo Koontadaada Bangiga 2021
#9. Bangiga Axos
Noocyada Xisaabta Kaydinta, Hubinta, Amaahda
Bangiga Axos waa hoosaad ka tirsan kooxda Maaliyadeed ee Axos wuxuuna ka mid yahay bangiyada dhijitaalka ah ee ugu horreeya adduunka. Bangigan tooska ah wuxuu bixiyaa bangiyo shaqsiyeed, maalgelin, iyo xalal ganacsi.
Sidoo kale, waxay leedahay ikhtiyaarrada amaahda oo ay ku jiraan amaahda guryaha, amaahda shaqsiga ah, amaahda baabuurta iyo xitaa maalgelinta hantida maalgashiga.
Tilmaanta ugu fiican ee bangiga Axos waa noocyo badan oo kala duwan oo lacag la'aan ah, xisaabaadka jeegga ku saleysan abaalmarinta. Waxaa jira 3 koonto oo caadi ah oo hubinta ah iyo 2 xisaab hubineed oo khaas ah oo aad go'aansan karto inaad furto, iyadoo mid walba uu leeyahay faa'iidadiisa.
Maskaxda ku hay inaad u baahan tahay inaad bixiso khidmadda furitaanka koontada oo ah $ 50.
Mar labaad, waxaad u adeegsan kartaa barnaamijka moobiilka bangiga Axos si aad u gasho xisaabaadkaaga, u bixiso biilasha, u wareejiso ama u fuliso macaamil maaliyadeed kale.
BOOQO BANKII AXOS
#10. Bangiga Synchrony
Noocyada Xisaabta IRA, koontada suuqa lacagta, iyo koontada kaydka.
Macaamiisha aan dan ka lahayn inay lumiyaan bangi goobta ku yaal waxay go'aansan karaan inay isticmaalaan bangiga Synchrony. Bangiga Synchrony waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan qeybta bangiyada onlaynka ah ee lagu yaqaan koontada kaydka dhalidda ee sareysa.
Koontada kaydku ma laha shuruud dheelitir oo ugu yar, iyo APY oo ka sarreeya celceliska qaranka ee APY. Koontada, waxaad ku xiri kartaa kaarkaaga ATM -ka oo aad ku samayn kartaa macaamil kasta.
Bangiga Synchrony wuxuu kaloo bixiyaa kaar ATM oo lacag la'aan ah oo aad ku isticmaali karto ATM kasta si aad u hesho lacagahaaga. Markaa, waxaad si fudud u shubi kartaa, kala bixi kartaa, oo u wareejin kartaa lacagaha.
Baro dhammaan faa'iidooyinka ku xeeran bangigan onlaynka ah adiga oo gujinaya badhanka hoose
BOOQO BANKII SYNCHRONY
Hoos waxaa ku qoran soo koobidda bangiyada ugu fiican ee Massachusetts iyo sidoo kale dhigaalkooda ugu yar, qiimaha, iyo noocyada xisaabta.
Bank Kaydka APY Rate Ugu Yar Deposit account Noocyada
Bangiyada TD 0.05% 0.05% Hubinta, Keydinta.
Bank of America 0.00% $ 25- ardayda xisaabta jeegga Hubinta, Keydinta.
Bangiga Santander 0.03% $ 25 Kaydinta, Hubinta, iyo CD -yada
Bangiga Muwaadiniinta 0.01% $0 IRA, koontada suuqa lacagta, koontada kaydka, iyo CD -yada
Chase 0.01% $ 25 Hubinta, Keydinta, iyo CD -yada
Bangiga Trustland 0.02% $ 50 Hubinta, Keydinta, CD -yada.
Bangiga Dadweynaha 0.02% $ 50 Kaydinta, hubinta, iyo CD -yada
CIT 0.45% None Kaydinta, Hubinta, suuqa lacagta, CD -yada iyo xisaabaadka Ilaalinta.
Bangiga Axos 0.61% None Kaydinta, Hubinta, Amaahda.
Bangiga Synchrony 0.60% $0 Kaydinta, Hubinta, xisaabaadka suuqa lacagta, IRAs
bangiyada ugu fiican ee Massachusetts
Faallooyinka MySavingsDirect 2022: Sida ay u Shaqeyso | Sharci ama Fadeexad
Sida Loo Sameeyo Lacag Online Ah Iyadoo Aan Waxba Bixin: 15 Siyaabood Oo Ugu Fiican
Dhammaanteen waa inaan iska diiwaan gelinaa naadiga jimicsiga. Ugu yaraan habkaas, waxaan hubnaa inaan caafimaad ahaan sii ahaan doono iyo…
Amaahda shakhsi ahaaneed waxay ku anfici karaan daryeelka kharashaadka qoyska sida hagaajinta guriga, lacagaha fasaxa, kharashyada arooska,…
Bangiyada ugu Fiican Utah Sanadkii 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Ka soo xulista bangiga saxda ah liiska bangiyada Utah (Ut) ee hay'adaha qaranka ilaa gobolka…
Inkasta oo sheekooyinka xun ee laga soo tuuray Afrika, haddana waxay weli tahay mid ka mid ah kuwa ugu dabiiciga ah ...
Bangiyada ugu Fiican Portland sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Waa wax iska cad in dadku ay haystaan ​​ikhtiyaaro kala duwan marka ay timaaddo bangiyada iyo dadka ku nool Portland aysan ahayn…